SCIENCE TO SOCIETY: October 2014
डा. धिताल ले के चमत्कार गरे त्यस्तो?
फोक्सोको बिचमा रहेको मुटु (फोटो: स्रोत)
मुटु प्रत्यरोपरण के हो?
कुनै मान्छेको मुटुले कुनै कारणले कामै गर्न छोड्यो भने उसको जिबन बचाउनको लागि अर्को मान्छेको (डोनर) मुटु राख्नेलाइ मुटु प्रत्यारोपण भनिञ्छ । संसारमा सबै भन्दा पहिले सन् १९६७ मा पहिलो पटक मुटु प्रत्यारोपण गरिएको थियो । अहिले संसारभरि करिब ३५०० मुटु प्रत्यारोपण हुन्छन प्रत्यक बर्ष । यसरि प्रत्यारोपण गरेका मान्छे १५-२० वर्ष सम्म बाच्ने गरेका छन ।
कसरि हुन्छ प्रत्यारोपण?
विश्वमा करिब ८ लाख व्यक्ति मुटु फेर्न पर्ने स्थितिमा रहेको अनुमान गरिएको छ । तर चाहदा बित्तिकै मुटु फेर्न कहाँ पाइञ्छ र ? पहिलो कुरो त मुटु दान दिने डोनर भेट्टाउन पर्यो । डोनर मुटु र मुटु लिने बिरामीको आवश्यक जाच गरेर मुटु फेर्न मिल्छ भनेर निर्क्योल गरे पछि बल्ल सल्यक्रिया सुरु हुञ्छ । पहिले मुटु निकाल्न पर्यो । जिउदो मान्छेको मुटु निकाल्ने कुरो भएन, मरेको मान्छेको मुटु पनि मरि सकेको हुन्छ त्यसैले त्यो पनि काम लाग्ने कुरो भएन ।
अहिले सम्म के गरिन्छ भने, डोनर मुटु ब्रेन डेथ भएको मान्छेबाट निकालिञ्छ । ब्रेन डेथ भनेको ब्रेनले सम्पुर्ण रुपमा काम गर्न छोड्ने स्थिति हो । धेरै जसो मृत्यु घोषणा गर्दा यहि स्थितिलाइ आधार मानिञ्छ । तर कहिले काही आवस्यक पर्यो भने life support or ventillator मा राखेर पनि ब्रेन डेथ भएको व्यक्तिलाइ केहि समय राख्ने गरिञ्छ । त्यसो गर्दा स्वास फेर्ने र मुटुको धड्कन रही रहेको हुञ्छ । डोनरको मुटु निकालेर बरफमा राखिञ्छ । यसरी राखेको मुटु ४-६ घण्टा सम्म मुटु लिने बिरामीको छाति भित्र राखी सक्न पर्छ । त्यसैले life support मा राखेको ब्रेन डेथ भएको डोनर भेट्टाउनु पर्यो र तुरुन्तै प्रत्यारोपण गर्न सक्नु पर्यो । यो दुइवटा कारणले मुटु प्रत्यारोपण जति सहज हुन पर्थ्यो सकेको छैन, पैसो तिर्छु भन्दा पनि । मुटु प्रत्यारोपण गर्न करिब दस लाख अमेरिकी डलर लाग्न सक्छ । कति पए देशमा ब्रेन डेथ भएको व्यक्तिबाट शरीरको अंग निकाल्न मिल्दैन । यी सबै अफ्ठेरोलाइ डा. धितालको नया प्रयोगले सहयोग पुर्याउने देखिञ्छ ।
Labels: dhital, discovery, heart, kumud, transplantation